किन जुनकिरीको जीउमा बत्ती बल्छ ? | किन जुनकिरीको जीउमा बत्ती बल्छ ? – हिपमत
किन जुनकिरीको जीउमा बत्ती बल्छ ?
काठमाडौं,३ माघ :के तपाईंले जुनकिरी देख्नु भएको छ ? देख्नु भएको छ भने अवश्य तपाईंले त्यसको जीउमा कहिले बल्ने र कहिले निभ्ने बत्ती पनि देख्नु भएको छ होला । विशेष गरेर स–साना केटाकेटीहरु त्यसको अनौठो बत्ती देखेर आकर्षित हुने गर्छन् । त्यही भएर उनीहरु त्यसलाई पक्रेर बोतलमा राख्न वा हातले समाउन मन पराउँछन् । जुनकिरीले हामी सबैलाई अचम्ममा पारेको छ । वैज्ञानिकहरु पनि त्यसको शरीरमा हुने अनौठो क्रियाकलापको बारेमा धेरै लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेका छन् ।
कारण जे भए पनि जुनकिरीको बत्तीले हामी सबैलाई रोमाञ्चित पारेका छन् । तिनीहरुलाई हेर्दा हाम्रो मनमा विशेष आनन्द आउँछ । तिनीहरुले रातको वातावरणलाई पनि रमाइलो बनाइदिन्छन् । त्यही भएर होला, कविहरुले पनि तिनीहरुको बारेमा थुप्रै कविता लेखेका छन्